बिना मगरको चरित्र हत्या गर्ने को हुन् यी महिला? सबैले चिन्नुहोस – PathivaraOnline
Home > अपराध > बिना मगरको चरित्र हत्या गर्ने को हुन् यी महिला? सबैले चिन्नुहोस
admin April 11, 2018 अपराध, समाचार 0
काठमाडौं । प्रायः पुरुषबाट महिला पीडित भएको समाचार आउने त गरेकै हुन् । तर, एउटा महिलाबाट पुरुषमाथि कति अत्याचार हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चितवनकी देवी पौडेलले गुल्मीका शंकर ज्ञवालीमाथि गरेको व्यवहारले महिला पनि कति पीडक हुँदा रहेछन् भन्ने प्रष्ट देखाएको छ ।
विवाह गरेको पहिलो दिनदेखि नै उनीहरूबीच राम्रो सम्बन्ध भएन । तीनचार वर्ष जेनतेनसंगै बसे । एउटा बच्चा पनि जन्मियो । तर, त्यसपछि संगै बस्ने स्थिति नभएपछि ज्ञवालीले सम्बन्ध बिच्छेदका लागि उच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गराए । अदालतले सम्बन्ध बिच्छेद गरिदियो तर, पौडेलले सम्बन्ध विच्छेद गर्न अस्वीकार गरिन् ।
पौडेलले ‘सबन्ध बिच्छेद पनि गर्दिन, संगै पनि बस्दिन शंंकर ज्ञवालीलाई जीवनभरि सहज ढंगले काम गरेर खान पनि दिन्न दुःख दिएरै छोड्छु’ भनेर उच्च अदालतको निर्णयबिरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा अर्को मुद्दा दायर गरेकी छिन् । उनको यो अभियानमा केही अधिकारकर्मी महिला र एनजिओहरूले साथ दिएका छन् । तिनै एनजिओहरूको उक्साहटमा पौडेल रहेकी शंकरका परिवारजन बताउँछन् ।
यथार्थ र सत्यता जे सुकै भए पनि महिलाको मुद्धा एनजिओले निःशुल्क बोकेपछि ज्ञवाली र पौडेलको विषयमा झन् समस्या उत्पन्न भएको हो । पौडेललाई अधिवक्ता एवम् महिला अधिकारकर्मी मीरा ढुंगानाको एफडब्लु एलडी नामक एनजिओले आर्थिकदेखि सबै सहयोग गर्दै आएको छ । यही एनजिओका कारण ज्ञवाली र पौडेलबीचको विवाद लगातार बढ्दै गएको छ ।
०६६ मंसिर १ गतेदेखि ज्ञवाली र पौडेलसंगै बस्दैनन् । तर, पौडेलले ज्ञवालीबिरुद्ध घरेलुहिंसा भने भनेर दुई दर्जन मुद्दाहरू अदालतसहितका न्यायिक निकायमा हालेकी छिन् । त्यति मात्रै होइन, पौडेलले ज्ञवालीलाई कारबाहीको माग गरेर नेत्रविक्रम भन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को कार्यालयमा समेत उजुरी दिएकी छिन् ।
पछिल्लो समय पौडेलले सामाजिक संजालहरूमा ज्ञवालीविरुद्ध जथाभाबी लेख्नसम्म भ्याएकी छिन् । सामाजिक सञ्जालबाट गाली बेइज्जती र मानमर्दन गरेपछि पौडेलविरुद्ध ज्ञवालीले प्रहरीमा साइबर क्राइमको निवेदन दिएका छन् । प्रहरीले दुई दिन अगाडि पौडेललाई पक्राउ गरेको छ ।
तर, पौडेलविरुद्धको मुद्दा कमजोर बनाउन र छुटाउनका लागि एनजिओकर्मी एवम् अधिवक्ता मीरा ढुंगाना, अधिकारकर्मी मोहना अन्सारी, धनकुमारी सुनार, कमला हेमचुरी, मालती बस्नेत सक्रिय रहेको स्रोतले जनाएको छ । यीमध्येका केही अधिकारकर्मीहरू टेकु प्रहरीमा पुगेर प्रहरीलाई धम्की समेत दिइसकेका छन् ।
यो समूहले महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेललाई ठूलो दवाव दिएका छन् । उनीहरूकै दवावमा प्रहरीले मुद्दालाई सहि ढंगले अगाडि नबढाएको आरोप छ ।
अधिकारकर्मी महिला र एनजिओको आडमा शंकर ज्ञवालीकी गलफ्रेण्ड भनिएकी रमा पन्थीको नाममा ललितपुरमा रहेको फ्ल्याट समेत पौडेलले कब्जा जमाएर बसेकी छिन् । पौडेलकै कारण ज्ञवालीको शेयर, बैंकका खाता सबै बन्द भएको पीडित ज्ञवालीले बताए ।
यतिसम्मकी पौडेलले ज्ञवालीलाई माओवादी केन्द्रकी नेतृ एवम् खानेपानीमन्त्री बिना मगरको समेत सामाजिक सञ्जालमा बद्नामी गरेकी छिन् । ज्ञवालीले भने, ‘माओवादी नेतृ बिना मगरज्यूसँग अप्रसांगिक कुरा जोडर सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखिएको छ ।’ यो विषय पनि ज्ञवालीले प्रहरीमा दिएको निवेदनमा साथमा राखेका छन् ।
Dainiknepal बाट ।